कम्पनी विश्लेषण, शुक्रवार, १९ वैशाख २०७१ | गृहपृष्ठ
Home लगानी कम्पनी विश्लेषण, शुक्रवार, १९ वैशाख २०७१
on: १९ बैशाख २०७१, शुक्रबार ००:०० लगानी
कम्पनी विश्लेषण, शुक्रवार, १९ वैशाख २०७१
एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी
वर्गीकरण : निर्जीवन बीमा कम्पनी
सञ्चालन मिति : सन् १९९४
पछिल्लो कारोबार मूल्य : रू. २११
अध्यक्ष : सुरेन्द्र शिलवाल
महाप्रबन्धकः मोहन धौवडेल
-चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले रू. ३ करोड ७६ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनी रू. १ करोड ३२ लाख नोक्सानमा थियो । गतवर्ष बीमा समितिले कम्पनीको ‘अग्नि बीमालेख’ कारोबारमा रोक लगाएकाले व्यवसायका साथै नाफा पनि घटेको थियो । अहिले भने सबै समस्या समाधान गरेर समितिले नयाँ व्यवस्थापनलाई कम्पनी हस्तान्तरण गरेपछि व्यवसायमा वृद्धि भई नाफासमेत बढेको हो ।
-कम्पनी कारबाहीमा परेकाले चुक्ता पूँजी, जगेडा कोष, र बीमाकोषको रकम बढाउन सकेको छैन । अहिले रू. १० करोड १२ लाख रहेको चुक्ता पूँजी समितिको निर्देशनअनुसार रू. २५ करोड पु¥याउनुपर्ने भए पनि त्यसको योजना सार्वजनिक गरेको छैन ।
-कम्पनीको दीर्घकालीन लगानी तथा कर्जा १७ प्रतिशतले वृद्धि भई चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा रू. १० करोड ८३ लाख पुगेको छ । सो अवधिमा बीमाशुल्क, पुनर्बीमा कमिशन, लगानीलगायतको आय रू. ३३ करोड २५ लाख छ ।
-चालू आवमा कम्पनीको बीमाशुल्क आर्जन रू. ८ करोड ३८ लाख गरेको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा यस्तो रकम रू. २१ करोड १७ लाख अर्थात् ७२ प्रतिशत कम हो ।
-त्यसैगरी कम्पनीको जारी बीमालेख पनि समीक्षा अवधिमा ६८ प्रतिशत घटेको छ । चालू आवमा भुक्तानी हुन बाँकी दाबीबापतको रकम रू. ६० करोड ६३ लाख राखिएको छ । यस्तो रकम गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३० प्रतिशत बढी हो । कुल दाबी भुक्तानी सङ्ख्या पनि गत आवको तुलनामा ५० प्रतिशत घटेको छ ।
-समीक्षा अवधिमा कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३७ छ भने मूल्य–आम्दानी अनुपात रू. ५ रहेको छ । त्यस्तै, प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २ सय ३० र प्रतिशेयर कुल सम्पत्ति रू. ६ सय ८९ छ ।